बैंकिङ ब्याजदर बढेपछि समस्या समाधान गर्न समिति गठन « News24 : Premium News Channel
बैंकिङ ब्याजदर बढेपछि समस्या समाधान गर्न समिति गठन
काठमाडौं । सरकारले मुद्रा तथा पूँजी बजारमा देखिएको समस्याको अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । बैंकको ब्याज घटन थालेको र पूँजीबजारमा गिरावट आउन थालेपछि समस्या पहिचान र समाधान गर्न समिति गठन भएको हो ।
बैंकहरुले आफखुसी ब्याज बढाएको र शेयर बजार लगातार घट्न थालेपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले समस्या समाधान गर्न बिहीबार अध्यन समिति बनाएका छन्। समितिको संयोजकमा राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ छन् । त्यस्तै धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवतवहादुर कार्की, बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गाना, शेयर लगानीकर्ता संघका प्रतिनिधिहरु र अर्थमन्त्रालयका वित्तीय क्षेत्र ब्यवस्थापन हेर्ने सहसचिव समितिका सदस्य छन् ।
बैंकहरुले स्थानीय निकायको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न पाएको भोलीपल्टै मनपरी ब्याज बढाएपछि अर्थमन्त्री खतिवडाले समिति गठन गरेका हुन । ब्याज दर बृद्धिका कारण शेयर बजारमा उच्च गिरावट आएको थियो ।
शेयर बजार घट्ने र उत्पादनमूलक क्षेत्रको ऋण धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेकाले अर्थमन्त्रीको चासो बढेको हो । ब्याजदरमा भएको बृद्धिले लगानी निरुत्साहित हुने र मुलुकको आर्थिक बृद्धि दर नै प्रभावित हुने सम्भावना बढेको छ ।